Konke Okufanele Ukwazi NgePregabalin - Buyaas
Imikhiqizo yebanga lemithi yezokwelapha namafemu
Konke Okufanele Ukwazi NgePregabalin
I-Pregabalin (I-148553-50-8) isidakamizwa esithengiswa kakhulu ngaphansi kwegama lomkhiqizo iLyrica ezifundeni ezahlukahlukene emhlabeni. Umuthi olwa ne-epileptic obizwa nangokuthi yi-anticonvulsant. Umuthi usetshenziselwa ukunciphisa ijubane lobuchopho obuholela ekubambeni. Ngakolunye uhlangothi, iPregabalin ithinta amakhemikhali obuchopho athumela izibonakaliso zobuhlungu kulo lonke uhlelo lwezinzwa zomzimba. Lesi sidakamizwa sisetshenziswa futhi ezweni lezokwelapha ukuphatha izinhlungu ezihlukene ezibangelwa izifo ezahlukahlukene ezinjengobuhlungu bezinzwa obubangelwa yi-fibromyalgia, isifo sikashukela, kanye nobuhlungu bokulimala komgogodla.
I-Pregabalin ikhona amakhompiyutha, amathebula anwetshiwe, noma amaphilisi okusebenza isikhathi eside futhi kusisombululo somlomo (uketshezi). Zonke izinhlobo ze-Pregabalin zisebenza ngendlela efanayo, futhi udokotela wakho uzoba umuntu ongcono kakhulu wokukhetha okulungile kuye ngokuya ngesimo sakho noma lokho ofuna ukukufeza ekupheleni komjikelezo womthamo. Ukuba isidakamizwa somlomo kusebenza njengesidakamizwa sobuhlungu esihle kunazo zonke kwiziguli eziningi ezingaguquki ngemijovo ejwayelekile. Umuthi nawo ungaholela emiphumeleni emibi ethile uma ususetshenziswa ngokweqile noma usetshenziswa kabi. Qiniseka ukuthi uhlala ulandela imiyalo yemithamo yemiphumela engcono.
I-Pregabalin (148553-50-8) ingasetjenziswa neminye imithi ukusiza ukwelashwa kokuqala kokubeletha ezinganeni ezineminyaka yobudala emine nabadala nabo. Iminyaka eminingi manje, lo muthi ubudlala indima ebalulekile ezweni lezokwelapha, usenze sibe esinye sezidakamizwa ezinamandla kakhulu ezisiza ngobuhlungu emakethe. Umuthi kufanele uphuzwe kuphela ngaphansi kokuyalelwa ngudokotela ukuthola imiphumela engcono. Noma kunjalo, ngaso sonke isikhathi qiniseka ukuthi uthola i-Pregabalin kumthengisi othembekile noma umenzi osondele kuwe.
2.Indlela yokusebenza ye-Pregabalin
I-Pregabalin ingelesigaba semithi elwa nama-anticonvulsants. Ngokuvamile, izidakamizwa ezikulesi sigaba zisebenza ngendlela efanayo futhi zisetshenziswa ekwelapheni kwezimo ezifanayo. Akukacaci ukuthi i-Pregabalin isebenza kanjani ngqo, kepha kukholakala ukuthi isebenza ngokuthoba izinzwa ezonakele emzimbeni eziholela ekubambeni noma ebuhlungwini. Umuthi unciphisa izinhlungu emzimbeni obangelwa yizizathu noma izifo ezahlukahlukene. Xoxa nodokotela wakho ukuthola eminye imininingwane ngePregabalin.
E-United States of America, uPregabalin uvunyelwe ukusetshenziswa ekwelapheni izifo ezinjengokuthi;
I-post-herpetic neuralgia noma izinhlungu ezenzeka ngemuva kokuqhekeka
Ubuhlungu besifo sikashukela se-neuropathy futhi
I-Fibromyalgia yisimo sempilo esihilela izinhlungu ezinwebekile, njengasemisipha, izicubu ezithintekayo, noma impendulo ephakeme nebuhlungu yokuthintwa. Kwezinye izingxenye zomhlaba, njengaseYurophu, iPregabalin isetshenziswa ekwelapheni ukuphazamiseka kokukhathazeka, isimo esetshenziswa eminye imithi ukwelapha e-United States of America. Njengoba kushiwo ngaphambili, iPregabalin isetshenziswa nezinye izidakamizwa ukuqinisa imiphumela. Odokotela bangaphinde banikeze umuthi ezigulini ezinezimo ezahlukahlukene ezingalashwa noma zilawulwe yi-Pregabalin.
Umthamo we-Pregabalin uncike esimweni esingaphansi kokwelashwa. Kodwa-ke, umthamo ophansi kakhulu yi-25mg, kanti inani eliphakeme liyi-600mg ngosuku. Udokotela wakho uzokusekela isilinganiso esifanele ngemuva kokuhlola isimo sakho. Kwesinye isikhathi ama-medics azokweluleka ukuthi uqale ngemithamo ephansi, engalungiswa nangesikhathi. Kwezinye izimo ezihlukile, udokotela wakho angangeza umthamo ngokwengeziwe. The Umthamo wePregabalin kukhona kanje;
Umthamo we-Adult Diabetesic Neuropathy
Ukuze kukhishwe ngokushesha, umthamo wokuqala yi-50mgs okufanele uthathwe kathathu ngosuku. Umthamo ungangezelelwa udokotela wakho uye kwi-100mg ukuthi uphuzwe kathathu ngosuku ngeviki lokuqala, okuzocaciswa ukuthi umzimba wakho uphendula kanjani kumthamo wokuqala. Ukuhlolwa kwezokwelapha kubalulekile ukuqapha inqubekelaphambili yokwelashwa. Ngalesi sikhathi, umthamo wePregabalin ungelulwa ufike ku-300mg ephezulu ngosuku, kepha lokho kufanele kwenziwe ngesikhathi. Wabasaqalayo bahlala belulekwa ukuthi baqale ngemithamo ephansi ukwehlisa imiphumela emibi.
Ukukhishwa okwandisiwe kuzokudinga ukuthi uthathe umthamo wokuqala we-150mg umthamo womlomo kanye ngosuku, futhi kunconywe ukuthi uwuphuze ngemuva kokudla kwakusihlwa. Udokotela wakho angangezela umthamo aze afike kumthamo omkhulu we-330mg nsuku zonke. Ukwanda komthamo kungenzeka kuphela ngemuva kokuthi udokotela ehlole intuthuko yakho nokubekezelelana komzimba wakho kuPregabalin. Khumbula, ungalungisi iPregabalin (148553-50-8) umthamo ngaphandle kokuholwa udokotela wakho. Kungaholela emiphumeleni emibi kakhulu.
Usuku ozobe ushintsha ngalo umthamo thatha imithamo evamile yasekuseni njengoba kuchaziwe ngomuthi wakho bese uqala umthamo omusha ngemuva kwesidlo sakho sakusihlwa. Izifundo zobudokotela ziveze ukuthi ukuthatha imithamo ephezulu ye-600mg ngosuku akunikeli ezinye izinzuzo ezingezekile. Ngakho-ke, kufanele unamathele kumthamo onconyiwe. Ukuthatha i-300 ephezulu kune-330gm ngosuku futhi akunconywa ngoba kungaholela emiphumeleni encike kumthamo.
Umthamo wabantu abadala we-Postherpetic Neuralgia
Lapha imithamo ihlukaniswe izigaba ezimbili, ukukhishwa ngokushesha, nokukhululwa okunwebekile, futhi womabili ahlukile kwimithamo. Isibonelo, ekukhishweni ngokushesha, umthamo wokuqala we-Pregabalin ngu-150mg kuya ku-300mg ngosuku, ehlukaniswe ngemiyalelo emibili noma emithathu ngosuku. Ngokufanayo, imithamo ingandiswa ibe yi-300 ngosuku ngemuva kwezinsuku ezimbalwa kuye ngokuthi umzimba wakho uphendula kanjani kumthamo wokuqala. Uma imiphumela imangalisa, khona-ke udokotela ngeke abe nesizathu sokuyandisa. Umuthi futhi ungokwehlisa umthamo ngokuqhubekayo uma uthatha imithamo ephansi futhi uhlangabezana nemiphumela emibi kakhulu.
Ngemuva kokuthatha umthamo we-300mg cishe amasonto amabili kuya kwamane, futhi impumuzo yezinhlungu ayanele, udokotela anganquma ukuyinyusela cishe kuma-600mgs nsuku zonke ukuthi athathwe kabili noma kathathu ngosuku. Khumbula, i-600mg ngosuku iy umthamo ophakanyisiwe ophakeme kunazo zonke iziguli. Ukudlula kuleli zinga kungaholela emiphumeleni emibi yePregabalin, okuzoba nzima noma kubize ukuhlehlisa.
Lapha, umthamo wokuqala wePregabalin yi-165mg okufanele uthathwe kanye ngosuku, futhi kunconyelwe ukuthi uyithathe ngemuva kwesidlo sakusihlwa. Kukhona futhi ithuba lokuthi umthamo unganyuswa uye kwi-330mg kungakapheli isonto lokuqala lomjikelezo womthamo. Ngemuva kwamaviki amabili noma amasonto ezokwelapha futhi akukho ngcono okukhulu ezinhlungwini lapho udokotela wakho angakhuphula umthamo uphelele lapho ama-660mgs ngosuku. Lapho ushintsha imithamo, thatha owokuqala ekuseni ukuze ukhishwe ngokushesha bese uqala umuthi okhululiwe ngemuva kokudla isidlo sakho sakusihlwa.
Umthamo wabantu abadala wesifo sokuwa
Ukwelashwa kwesithuthwane, umthamo wokuqala womlomo yi-150mg ngosuku, ohlukaniswe kabili noma kathathu. Njengakweminye imithamo yokwelapha, udokotela angayandisa umthamo ukuya kuma-600mgs ngosuku futhi kufanele ihlukaniswe ukuze iphuzwe kaningi noma kathathu ngosuku. Lapha umthamo omkhulu ngu-600mg ngosuku.
Ukusebenza kahle nemiphumela yalesi sidakamizwa konke kuncike kumthamo wezidakamizwa. Akukho cwaningo okufakazele ukubaluleka kokuhlanganisa iPregabalin ne-gabapentin. Kodwa-ke, udokotela wakho uzokucebisa kabanzi ngokuthi iyiphi imishanguzo ongayisebenzisa kanye nalesi sidakamizwa.
Fibromyalgia umthamo wabantu abadala
Lapha umthamo wokuqala yi-75mg uthathwa kabili ngosuku futhi ungashintshwa ku-150mg amahlandla amabili ngosuku ngeviki lokuqala lomthamo. Umthamo ungangezelelwa futhi uye kwi-225mg ukuthi uthathwe kabili ngosuku. Umthamo omkhulu we-fibromyalgia yi-450mgs nomthamo wokulungiswa ongaba yi-300mg kuya ku-450mg. Ngakolunye uhlangothi, ucwaningo lukhombisa ukuthi ukuthatha ama-600mgs ngosuku akunikeli ezinye izinzuzo ezengeziwe zePregabalin kepha kungaholela emiphumeleni emibi kakhulu.
I-Pregabalin yobuhlungu be-Neuropathic
Umthamo wokuqala yi-75mg ngosuku futhi ungangezelelwa ube yi-150mg ngosuku. Uma kwenzeka, ngemuva komthamo wamaviki amabili noma amathathu, akukho ukuthuthuka okuphambili, khona-ke umuthi wakho ungayilungisa ibe ngaphezulu kwi-300mgs. Umthamo wokuncoma weSondlo uluka ku-150 uye ku-600mg imithamo ehlukaniswe ngosuku.
I-Ultimate Guide kuDihydroboldenone / DHB ye-Bodybuilding
Emhlabeni wezokwelapha, kusobala ukuthi i-Pregabalin iletha imiphumela esezingeni nekhangayo yabasebenzisi abalandela imiyalo yemithamo. Kusukela kokuqala kokuvuma umuthi ku-2004, izigidi zeziguli ziye zazuza kuPregabalin ikakhulukazi ekuphatheni izinhlungu zezinzwa ezibangelwa yizifo ezahlukahlukene ezinjenge-Epilepsy, ne-Post-herpetic neuralgia noma izinhlungu ezenzeka ngemuva kokushwabana, ubuhlungu besifo sikashukela se-neuropathy ne-Fibromyalgia. Kuya ngokuthi umzimba wakho uhlangana kanjani nePregabalin, ungalindela ukujabulela umphumela esikhathini esifushane kakhulu.
Izinsuku ezimbalwa zokuqala zomthamo unikeza udokotela wakho ithuba lokuhlola intuthuko yakho ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuthi uzowulungisa yini umthamo phansi noma ngaphezulu. Ucwaningo lukhombisa ukuthi kufanele ulindele imiphumela ezinsukwini ezimbalwa zokuqala komthamo. I-Pregabalin iyisidakamizwa esisebenza ngokushesha, futhi kufanele, ngakho-ke, ulindele ukuthi izinhlungu zizolulama ezinsukwini ezimbalwa zokuqala komthamo. Uma kwenzeka ungatholi lutho olungcono phakathi kweviki lokuqala lokuthatha umthamo wakho, yazisa udokotela wakho ukuthi alungise umthamo wemiphumela engcono. Imizimba yabantu ihlukile, futhi akuyona ezenzakalelayo ukuthi uthola imiphumela ngokushesha njengoba abanye bezokwenza. Futhi ngokuya ngesimo ukuthi ungaphansi kwemithi yakho, imiphumela izohluka. Ezinye ezejwayelekile Imiphumela yePregabalin faka;
Yehlisa Ubuhlungu be-nerve
I-Pregabalin isidakamizwa esinamandla uma kufikwa ekunciphiseni izinhlungu ezibangelwa ukulimala kwezinzwa ezifana ne-peripheral diabetesic neuropathy, i-chemotherapy-indedu neuropathic pain, noma i-Fibromyalgia. Ucwaningo oluhlukile lubonisa ukuthi iPregabalin isidakamizwa esisebenza kahle kunazo zonke ekunciphiseni izinhlungu ze-neuropathic. Isengezo sihlala sisebenza lapho sisetshenziswa sodwa noma noma sihlanganiswa nezinye izithasiselo zezokwelapha.
Ithuthukisa impilo yekhwalithi yeziguli ezineFibromyalgia
Njengoba kushiwo ngaphambili, i-Fibromyalgia yisimo lapho uhlangabezana khona nobuhlungu obudlangile. Izimpawu zayo zifaka izinga lokulala elibi, ukukhathala, ukukhathazeka, ukudangala, ukuqina kanye nokuqina kwemisipha. Umuthi usiza iziguli ukulawula yonke le miphumela.
Yehlisa izimpawu ze-Epileptic
I-FDA ivume uPregabalin (148553-50-8) ekwelashweni isithuthwane. Lesi sidakamizwa sinconyelwa iziguli ezinesifo sokuwa okuyingxenye ngenxa yokulimala kobuchopho. Iphinde futhi isetshenziswe njengendlela yokwelapha ehlanganisa abantu yokuthi eminye imishanguzo ye-anti-epileptic yehlulekile ukusebenza.
Yize e-United States of America, iPregabalin ayisetshenziselwa ukwehlisa amazinga okukhathazeka, eYurophu, umuthi ukhombisile ukuba yisixazululo esihle kakhulu. I-Pregabalin kuthiwa isetshenziselwa i-off-label ukusiza ekwelapheni ukuphazamiseka kokukhathazeka ezingxenyeni ezahlukahlukene zomhlaba. Kukhona futhi ezinye izimo ezingabhalwe phansi lapho udokotela wakho angabona kudingekile ukunquma i-Pregabalin futhi aqhubeke nokuletha imiphumela yekhwalithi. Zombili lezi zifundo zesikhashana zezempilo zesikhashana nezesikhathi eside zibonisa ukuthi lesi sidakamizwa singalapha ngempumelelo ukukhathazeka okulinganiselayo kubantu abadala kakhulu.
Imfihlo yekhwalithi yemiphumela yePregabalin ifaka udokotela wakho kuyo yonke inqubo yomthamo. Musa ukuguqula umthamo wePregabalin ngaphandle kokutshela umuthi wakho. Kangangokuba ungathenga kalula lo muthi ezitolo ezahlukahlukene ze-intanethi, ungaqali ukuwuthatha ngaphandle kokuyohlolwa udokotela. Lesi sidakamizwa sibe namandla okunciphisa izinhlungu ezidalwa yizizathu ezahlukahlukene. Abanye abasubathi basebenzisa iPregabalin ukulawula izinhlungu zemisipha, neminjunju yokulimala komgogodla, okuvamile ngenxa yokuzivocavoca okunamandla nemincintiswano.
6.Pregabalin uhhafu wempilo
Lesi sidakamizwa esisebenza ngokushesha esisebenza nomuntu osebenzayo Pregabalin uhhafu wempilo kwamahora we-6. Ngakho-ke, ukuthola imiphumela engcono yePregabalin, imithamo kufanele ihlukaniswe kabili noma kathathu ngosuku. Ukuba yisidakamizwa esidluliselwa ngomlomo, kwenza kube lula kuwe ukuthola imiphumela ngoba usususa isigamu sempilo. Khumbula njalo ukuthi unamathele emiyalweni yemithamo enikezwe udokotela wakho. Noma uthatha umthamo ophansi noma ophakeme kakhulu, isigamu sempilo yalesi sidakamizwa sihlala sinjalo.
7.Imiphumela emibi yePregabalin
Njengazo ezinye izidakamizwa emakethe namuhla, iPregabalin nayo ingakuveza emiphumeleni emibi uma uyisebenzisa ngokweqile. Ubukhulu be Imiphumela emibi yePregabalin kungumphumela wokusebenzisa kabi noma kwesinye isikhathi lapho uhlelo lwakho lomzimba luphathwa kabi ngomuthi. Kungakho kuhlale kuhlakaniphile ukuthi uqale ngemithamo ephansi, engahle ishintshwe ngemithi yakho ngemuva kokubheka ukuthi umzimba wakho uphendula kanjani emithini. Eminye yemiphumela emibi kakhulu yePregabalin ifaka phakathi;
Isiyezi-kwesinye isikhathi ungahle ubhekane nobunzima ngenkathi uthatha lo muthi, kepha kufanele unyamalale ngemuva kwesikhathi esithile.
Ukuqhephuka, umlomo owomile, kanye nekhanda nakho kuneminye imiphumela emibi ebanzi ongaba nayo lapho uthatha lo muthi.
Abasebenzisi abaningi bePregabalin bakhala nangokuthi kukhule isifiso sokudla, okuholela ekuzuzeni isisindo somzimba.
Kukhona futhi amacala okuntuleka kokuxhumana kwemisipha, izinkinga zokukhuluma, kanye nokuntuleka kokulinganisela komzimba.
Yonke le miphumela emibi yePregabalin inyamalala ngemuva kwesikhathi esithile, kepha uma kwenzeka ihlala isikhathi eside kunokulindelekile, kufanele wazise udokotela wakho ukuthi akusize uthole isisombululo ngaphambi kokuba isimo sibe sibi. Ngakolunye uhlangothi, kunemiphumela emibi ethile okufanele uthinte umuthi wakho ngokushesha uqala ukubhekana nayo, futhi ifaka phakathi;
Izinkinga zombono, lapho uqala ukubona umbono ophindwe kabili, noma umbono ofufiphele noma noma yiluphi ushintsho emehlweni akho unganqikazi, shayela udokotela wakho ngokushesha.
Ukudumba kobuso, izindebe zomlomo, amehlo, umphimbo, ulimi, intamo, noma ikhanda lekhanda nakho kufanele kubikwe ngokushesha.
Eminye imiphumela emibi kakhulu ifaka phakathi; amabhulukwe, ukulunywa, ukuvuvukala kwamaqakala, imilenze engezansi, izandla, izingalo noma izinhlungu esifubeni.
Izindaba ezimnandi ukuthi yonke le miphumela emibi ye-Pregabalin ingalawulwa uma wazisa udokotela wakho ngokuhamba kwesikhathi yize ezinye izimo zizoshabalala ngokuhamba kwesikhathi lapho uthola imiphumela esezingeni eliphezulu esishiwo ngenhla ungaqhubeki nokuthatha umthamo ngaphandle kokutshela umuthi wakho. Udokotela wakho anganquma ukumisa umthamo uma isimo singalawuleki noma ekuphakamisela enye indlela, ephephile umuthi.
Lesi sidakamizwa esiveze ukuthi siphakathi kwemithi enamandla kakhulu yokulwa nesithuthwane emakethe namuhla. Kusetshenziselwe ukudambisa izinhlungu ze-neuropathic emhlabeni wonke, futhi kwezinye izifunda njengaseYurophu, kwavunyelwa ukwelashwa okuxakayo. Ziningi izinzuzo ozozijabulela lapho uthatha lo muthi, Izinzuzo zePregabalin okulandelayo;
Ihambisa imiphumela yekhwalithi
Izifundo zobudokotela zikhombisile ukuthi iPregabalin inikeza imiphumela esezingeni kubo bonke abasebenzisi bayo abalandela imiyalo yemithamo. Kulabo abayisebenzisela izinhlungu ze-neuropathic, ungathola ukuthuthukiswa noma ngemuva kokuthatha umthamo wakho wokuqala. Lingakapheli iviki lokuqala, kufanele uqale ukuthola imiphumela ephelele, futhi lokho kunikeza abezempilo ithuba lokuhlola inqubo yemithi. Akunandaba noma yisiphi isizathu sokusebenzisa iPregabalin, imiphumela ihlala imangalisa.
I-Pregabalin ihanjiswa ngomlomo, futhi ngenxa yalokho, akukho imijovo ethintekayo. Ngakho-ke, isebenza njengomuthi omuhle kakhulu wabasebenzisi abangakhululeki ngemijovo ejwayelekile. Akudingeki ukhathazeke nganoma iyiphi iminjunju, futhi ungahambisana kalula nalesi sidakamizwa neminye imithi inqobo nje uma wazisa udokotela wakho.
Uma kuqhathaniswa neminye imithi yomlomo, iPregabalin inempilo ende esebenzayo ohlelweni lwakho lomzimba, ekuqinisekisa ngemiphumela eqinile nekhwalithi. Ngokuya ngesimo osiphatha ngalo muthi, uzodinga kuphela ukuthi uphuze umthamo wakho cishe amahlandla amabili noma amathathu ngosuku futhi kwesinye isikhathi ngosuku ngosuku ngemuva kwesidlo sakusihlwa.
Ungakwazi kalula thenga i-Pregabalin powder ngobuningi noma okwanele nje umjikelezo wakho wesilinganiso kusuka ezitolo ezahlukahlukene ze-intanethi noma ekhemisi eliseduze ngoba kusemthethweni ezingxenyeni eziningi zomhlaba. Udokotela wakho uzoba ngumuntu ofanele ukukukhombisa ukuthi uzothenga kuphi. Lokhu kwenza kube lula kuwe ukuthi uthenge futhi usebenzise umuthi ngaphandle kokwesaba ukungqubuzana nomthetho.
Imiphumela emibi emincane engaphansi
I-Pregabalin ikudalula imiphumela emibi emincane uma iqhathaniswa namanye ama-anticonvulsants. Uzozwa kuphela imiphumela emibi ejwayelekile efana nekhanda, ukuhlanza, phakathi kwabanye izinsuku zokuqala zomthamo, futhi zizonyamalala. Ngakolunye uhlangothi, uma wazisa udokotela wakho kusenesikhathi ngokwanele, imiphumela esezingeni eliphezulu ingalawulwa kalula. Kodwa-ke, ukuze uthole isipiliyoni esingcono, qiniseka ukuthi awusebenzisi noma wenze ezinye izinguquko zomthamo ngaphandle kokutshela udokotela wakho.
Uma ubheka ukubuyekezwa okuhlukahlukene kwePregabalin, kuyacaca ukuthi abasebenzisi abaningi banelisekile ngemiphumela abayitholayo ngemuva kokudla umuthi. I-Pregabalin isetshenziswa njalo njengesidakamizwa esidambisa izinhlungu, futhi ibilokhu ithola impendulo enhle evela kubasebenzisi abaningi. Abaphenyi bezokwelapha baphinde bafaka okutholakele okuhlukile, yingakho i-FDA igunyaze ukuthi isetshenziswe ekwelapheni i-Epilepsy, i-Post-herpetic neuralgia noma izinhlungu ezenzeka ngemuva kokushiswa yisifo sezinhlungu, isifo sikashukela se-neuropathy kanye ne-Fibromyalgia.
Kwezinye izingxenye zomhlaba njengaseYurophu, iPregabalin ivunyelwe ukwelashwa kwabantu abadala. Kodwa-ke, futhi kunezimo ezimbalwa ezibikiwe lapho abanye abasebenzisi bebenolwazi olubi kakhulu ngalo muthi. Izidakamizwa zisabela ngendlela ehlukile ngemizimba yabantu, futhi akuzenzakaleli ukuthi kusebenza kuwe ngoba kusize umngani wakho. Amanye amacala emiphumela emibi eye yabangelwa ukweqisa nokusebenzisa kabi iPregabalin.
Ngokufingqa, lesi yisidakamizwa esihle lapho sisetshenziswa kahle nangezizathu ezifanele. Isize izigidi zabantu abaphethwe yizifo ezahlukahlukene, njengoba kuqokonyiswe ngenhla. Njenganoma yisiphi esinye isidakamizwa esikhonjelwe, akufanele uthathe i-Pregabalin ngaphandle kokuthi udokotela wakho ekuncoma. Uma kwenzeka uthola imiphumela emibi futhi yazisa udokotela wakho ngokushesha ukukusiza ukuba unqobe.
Umhlaba uyashintsha, futhi namhlanje, ungakwazi Thenga i-Pregabalin powder online epulatifomu yethu ngentengo engabizi. Iwebhusayithi yethu iyasebenziseka kalula, okwenza kube lula kuwe ukuthi uqondise komunye umkhiqizo uye komunye futhi wenze i-oda lakho ngemizuzwana. Ungangena kwiwebhusayithi yethu nge-smartphone yakho, ithebhulethi, noma ne-laptop yakho. Ngaphezu kwalokho, senza ukudiliva umhlaba wonke futhi kungakapheli isikhathi esifushane. Ungathenga iPregabalin ngobuningi noma ngisho nokwanele emjikelezweni wakho wesilinganiselo.
Singumhlinzeki ophambili wePregabalin esifundeni, futhi amanani ethu angabizi ikhwalithi yemikhiqizo yethu. Sinikeza ngemikhiqizo ehlukahlukene esezingeni eliphakeme yezitolo esitolo sethu online. Kodwa-ke, sihlala sicebisa wonke amakhasimende ethu ukuthi aqinisekise ukuthi ayahlolwa udokotela ngaphambi kokuqala ukuthatha imikhiqizo yethu. Imikhiqizo yethu yezokwelapha ingaholela emiphumeleni emibi lapho isetshenziswe kabi noma ngokweqile. I-Pregabalin iyathengiswa iyatholakala nasekhemisi lakho eliseduzane kepha qiniseka ukuthi uyithola kumthengisi othembekile. Akuzona zonke izitolo zezokwelapha eziku-inthanethi noma ezibonakalayo ezinikela ngemikhiqizo esezingeni.
11.I-Pregabalin yokwelapha ubuhlungu be-Nainx nexhala
Eminyakeni eminingi manje, i-Pregabalin ibilokhu ibalulekile ezweni lezokwelapha kakhulu ekwelapheni izinhlungu zezinzwa, ezaziwa njengezinhlungu ze-neuropathic. Umuthi usebenza ngokulawula amakhemikhali obuchopho athumela amashe ezinhlizweni zakho, okuthi nawo anciphise izinga lobuhlungu ohlelweni lwakho lomzimba. E-United States of America i-FDA igunyaze uPregabalin ukuthi elashwe ngobuhlungu bezinzwa obubangelwa izifo ezahlukahlukene ezinjenge-Epilepsy, Fibromyalgia, ne-post-herpetic neuralgia noma izinhlungu ezenzeka ngemuva kokuhlunguphaza kanye nobuhlungu besifo sikashukela se-Diabetes.
Kodwa-ke, i-Pregabalin (148553-50-8) ayikavunywa ekwelashweni kokukhathazeka e-US, yize kunemibiko yokuthi abanye abasebenzisi bayisebenzisela ilebula ukulawula isimo. Kwezinye izingxenye zomhlaba njengaseYurophu, iPregabalin iye yamukelwa ekwelapheni ukukhathazeka kubantu abadala. Kukhona nemibiko engaqinisekisiwe yokuthi iPregabalin ingasetjenziselwa ukulawula ukudana. Ngeminye imininingwane ngePregabalin, thintana nodokotela wakho noma uthintane nosokhemisi wakho.
UKim, uSc, uLandon, uJE, noSolomoni, uDH (2013). Izici zokwelapha nezindlela zokwelapha ezisetshenziselwa iziguli ze-fibromyalgia ezisanda kumiswa i-amitriptyline, i-duloxetine, i-gabapentin, noma i-pregabalin. Ukunakekelwa kwamathambo nokucwaninga, 65(11), i-1813-1819.
UGoodman, CW, & Brett, AS (2017). IGabapentin ne-pregabalin yobuhlungu-iyanda njengokuchaza isizathu sokukhathazeka? I-New England Journal of Medicine, 377(5), i-411-414.
Lam, DM, Choi, SW, Wong, SS, Irwin, MG, & Cheung, CW (2015). Ukusebenza kwePregabalin kubuhlungu obukhulu be-postoperative ngaphansi kwemikhakha ehlukene yokuhlinza: ukuhlaziywa kwe-meta. Medicine, 94(46).
Baldwin, DS, Ajel, K., Masdrakis, VG, Nowak, M., & Rafiq, R. (2013). I-Pregabalin ekwelapheni ukukhathazeka okubangelwa ukukhathazeka ngokubanzi: isibuyekezo. Isifo se-Neuropsychiatric kanye nokwelashwa, 9, 883.
I-Hengfei Biological, etholakala ku-2008, iyinkampani ephezulu yezokwelapha imithi yezokwelapha ukuhlanganisa ukukhiqizwa, i-R & D nokuthengisa.
Umhlahlandlela Wokugcina weTrestolone Acetate (MENT) wokwakha umzimba
Konke Okufanele Ukwazi Nge-Tadalafil
I-testosterone phenylpropionate: Konke Okudingwa Umzimba Wokwakha Izidingo
I-86 (1351) i-0676296
I-West Yucheng Station, Idolobha laseYucheng, isifunda seLisheng, isiLuhe, isiFunda saseHenan eChina